Liistada Hubinta Waxyaabaha Websaydhka: 67ka Ugu Dambeeya Waa Inay Ku Dhacdaa Goobtaada | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 2, 2020 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Douglas Karr
Cajiib. Waan jeclahay marka qof naqshadeeyo liis hubineed oo ku saabsan faahfaahinta macluumaadka oo labadaba fudud oo wax ku ool ah. Dib-u-eegista Marti-geliyaha Webka ee UK loogu talagalay qaab-hawleedkan si loo horumariyo liistada astaamaha ay rumeysan yihiin in lagu daro ganacsi kasta 'joogitaanka khadka tooska ah.
Si ganacsigaagu ugu guuleysto khadka tooska ah waxaad u baahan tahay inaad hubiso in websaydhkaagu ka kooban yahay muuqaal buuxo! Waxaa jira faahfaahin badan oo yar oo samayn kara dhammaan farqiga - labadaba marka la eego sidii macaamiisha loo siin lahaa kalsooni iyo sidoo kale iyaga oo siiya hawlo dheeri ah oo ka caawiya beddelaadyada iyo hagaajinta khibradda guud ee isticmaale ee bartaada. Waxay ka dhigeysaa ganacsigaaga mid ka duwan kan kale oo ku siinaya gees tartan.
Liiskan waxaa loogu talagalay nooc kasta oo ganacsi iyo bogagga e-commerce waa inay fiiriyaan sidoo kale. Waxaan ku daray waxyaabo aad u tiro yar marka lagu daro liistadooda hubinta ee ay tahay inaad sidoo kale ku darto!
Guud ahaan, waa gabi ahaanba lama huraan in websaydhkaagu la kulmo ujeedada aad maalgashiga u tahay - inaad ganacsi wado. Taasi waxay ka dhigan tahay booqde kasta inuu ku dego ujeeddo, uu helo macluumaadka uu u baahan yahay, u horseedo beddelaad, oo ku siiyo ogeysiisyada lagama maarmaanka ah iyo warbixinta aad u baahan tahay inaad sii waddo hagaajinta goobta.
Shirkado aad u tiro badan ayaa si xad dhaaf ah diiradda u saaray naqshadeynta. Naqshad qurux badan ayaa ku siinaysa saamaynta degdegga ah ee aad doonayso inay booqdayaashu ku yeeshaan, laakiin mooyee in degelku si dhab ah u shaqeynayo oo u wado iibinta shirkaddaada, uma qalanto maalgashiga. Taa bedelkeeda, wakaaladuhu badanaa ma bixiyaan dhammaan astaamaha boggaagu u baahan yahay inuu guuleysto. Beddelka, raadinta, iyo hagaajinta bulshada ma aha inay noqdaan kuwo lagu daro, waa inay saldhig u noqdaan mashruuc kasta oo websaydh ah.
domain name - taasi waa fududahay in la akhriyo oo la xasuusto. Kordhinta domainka .com wali waa mid qiimo leh maxaa yeelay taasi waa sida daalacayaashu u xallin doonaan haddii aad ku qorto boggaas adigoon kordhin. Kordhinta cusub ee domainku waxay helayaan wax la aqbali karo (tusaale. .Zone halkan!) Markaa haka walwalin… mararka qaarkood domain gaaban oo wata kordhin kale wuxuu noqon karaa xalka xusuus badan kan domainka dheer ee .com oo aan macno samaynayn ama u baahan jajab iyo ereyo kale. Waad la yaabi lahayd sida weyn ee heshiis aad uga heli karto xaraashyada domainka, sidoo kale. Ha joojin raadintaada diiwaangelin cusub.
Logo - metelaad xirfadeed oo meheraddaada ah oo gaar u ah. Naqshada sawirka waa farshaxan farshaxan… oo u baahan kala duwanaansho, aqoonsi cabbir kasta ha lahaadee, midabo kuwaas oo bartilmaameedsanaya dhagaystayaashaada, oo laga yaabee inaad dirto farriin muuqaal ah oo saamayn ku yeelanaysa dhagaystayaashaada. Hubso inaad kuxirto astaantaada si aad ugu noqotid boggaaga guriga maadaama inta badan booqdayaashu u barteen taas.
TagLine - sharaxaad kooban oo ku saabsan waxa meheraddaadu qabato. Tani ma ahan inay ahaato muuqaal mooyee haddii aadan aheyn alaab hal-abuur ama adeeg ah. Diirada saar faa'iidooyinka badeecadaada ama adeegyadaada, ma ahan muuqaalka. Dufan ayuu gooyaa waa kufiican yahay Waaberiga. Laakiin liistada hirgelinta iyo isku dhafka halkii laga heli lahaa Xaqiiji Soo Noqoshadaada Maalgelinta Teknolojiyada ayaa aad ugafiican Highbridge.
Lambarka Telefoonka - a gujin karo iyo la raadin karo lambarka taleefanka (oo hubi inaad ka jawaabtay). Raadinta lambarka taleefanka ayaa kaa caawin doona inaad si fiican u sifeeysid ololeyaasha iyo sida rajadu kuu soo gaadhayso. Maaddaama isticmaaleyaashu inta badan yihiin mobilo, hubinta lambar kasta oo taleefan inuu yahay xiriir la gujin karo ayaa muhiim ah… hadda qofku wuxuu doonayaa inuu isku dayo oo nuqul ka sameeyo oo ku dhajiyo lambarka taleefanka shaashadda moobiilka.
Wax-u-qabasho - U sheeg martida waxa aad jeclaan lahayd inay sameeyaan marka xigta waana sameyn doonaan. Bog kasta oo ka mid ah boggaagu waa inuu lahaadaa CTA. Waxaan aad ugu talin lahaa lahaanshaha Wicitaanka Waxqabadka badhanka midigta kore ee hagitaankaaga sidoo kale. Fududee, u sheeg martida waxa xiga ee ay sameynayaan, kana caawi wadista safarka macaamiisha.
Navigation Sare - ikhtiyaarrada qarsoodiga ah si aad u hesho bogagga ugu sarreeya boggaaga. Menus-yada Mega waxay umuuqan karaan kuwo cajiib ah, laakiin ilaa ay sifiican uqaabeeyaan mooyee, xulashooyin aad u fara badan ayaa ku noqon kara dhagaystayaashaada. Waxaan arkay kaqeyb qaadasho iyo booqashooyinka bogga oo cirka isku shareeraya goobaha aan ka dhignay walxaha hagista qayb yar oo ka mid ah waxa ay ahaayeen.
Navigation Crumb Navigation - ka caawi martidaada inay si jaranjaro ah ugu dhex socdaan. U fidinta qof macnaheedu kor u kaca kor ahaan waa heer sare. Burcadka rootida sidoo kale waa aalado wax ku ool ah oo raadinta raadinta ah, oo siinaya matoorada raadinta faham fiican oo ku saabsan kala sareynta goobtaada. Gaar ahaan haddii aad tahay goob e-commerce oo leh tan qaybo badan iyo alaabooyin SKU ah.
Video gadaal, Sawir ama Slider - muuqaal ahaan u muuji dhibcaha iibka gaarka ah iyo kala duwanaanshaha. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xitaa ku darto sanduuqyada fudud. Markaad haysatid jaantus ama sawir si faahfaahsan u leh waxaad jeclaan lahayd booqdayaashu inay eegaan, samaynta sawir gujinaya halka sawirka, muuqaalka, ama slider uu ku sii fidayo dhismaha ugu badan ee guryaha waa khibrad isticmaale weyn.
Faallooyinka iyo Markhaatiyada - Cadeynta bulshada waa lama huraan. Inta badan soo-booqdayaasha mustaqbalka waxay rabaan inay fahmaan laba shay oo aad muhiim u ah do Ma sameyn kartaa waxa aad dhahdo ee aad sameyso? Maxaa caddeyn ah oo jirta oo aad karti u leedahay? Markhaatifurka qoraalka waa weyn yahay, fiidiyowgu xitaa wuu ka fiican yahay. Haddii aad la socoto qoraal, hubi inaad ku darto sawirka qofka oo ay la socdaan magacooda, cinwaankiisa, iyo meesha uu ku yaal (haddii ay khuseyso).
Macluumaad Ganacsi oo Muhiim ah - Goobtaada jireed iyo cinwaanka boostada ayaa ku habboon in lagu daro boggaaga. Haddii goobtaada jireed ay muhiim u tahay ganacsigaaga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto astaamahaaga cinwaanka, ama aad khariidad ku siiso goobta oo dhan si dadku si fudud kuugu helaan. Sidoo kale muhiimadu waa saacadaha macluumaadka iyo habka ugu wanaagsan ee lagula soo xiriiri karo.
Hoos ka laabo:
Dabcan, oo leh shaashado casri ah… laabku waa ku kala duwan yahay qalab kasta. Si kastaba ha noqotee, inta badan, waa aagga shaashadda oo aan isla markiiba la arki karin marka qof furo boggaaga biraawsar. Ha ka baqin boggaga dhaadheer… runti, waxaan tijaabinay oo aan aragnay bogag dhaadheer oo si habeysan loo qabtay oo waxqabad aad uga wanaagsan sameeya kuwa martida ah oo gujinaya inay helaan macluumaadka ay u baahan yihiin.
Nuxurka Tayada - soo jeedintaada gaarka ah ee iibinta ee loogu talagalay booqdayaasha iyo raadinta.
Features Main - ee alaabtaada iyo adeegyadaada.
Iskuxirayaasha Gudaha - bogagga shabakaddaada gudaha.
bookmarks - Iskuxirayaasha kujira waxyaabaha kujira bogga si ay uga caawiyaan adeegsadayaasha inay u boodaan ama hoos ugu boodaan bog si ay u helaan macluumaadka ay raadinayaan.
Navigation - marinka labaad ee bogagga guud. Jadwalka tusmada ayaa mararka qaar aad u fiican oo leh calaamado si looga caawiyo soo booqde inuu ka boodo hal qayb oo u gudbo kale.
Warbaahinta bulshada - ka caawi dadka inay kugu bartaan adoo adeegsanaya kanaallada bulshada.
Feature Chat Online - wada xiriirka degdega ah inta booqdaha uu cilmi baaris ku sameynayo. Chatbotyada ayaa noqonaya qalab layaableh si ay ugu qalmaan una maraan codsiyada iyagoo u maraya si sax ah oo ku haboon. Waxa kale oo jira qaabilaad dhinac saddexaad ah oo waqti-buuxa ah oo aad ka faa'iideysan karto haddii aadan haysan awood aad ku ilaaliso wadahadalkaaga inta lagu jiro iyo saacadaha shaqada.
Saacadaha Ganacsiga - oo ay weheliso goobtaada, tani waxay hubin doontaa booqdayaashu inay ogaadaan goorta ay booqan karaan. Saacadaha shaqada sidoo kale waa lagu dari karaa metadata-ka bartaada ee matoorada raadinta, tusaha, iyo adeegyada kale ee gurguurta boggaaga.
Macluumaadka xiriirka - cinwaanka (e-mayl) iyo cinwaan ahaan, lambarka taleefanka, iyo / ama cinwaanka iimaylka. Ka taxaddar inaad daabacdo cinwaanka emaylka, in kastoo. Crawlers-ka ayaa si joogto ah u soo qaada iyaga waxaana laga yaabaa inaad bilawdo inaad ku soo qulqulatid spam badan.
Nagu saabsan Nuxurka - waa maxay sheekadaadu?
Mawduuca Bogga Gudaha -waxsoosaarka alaabada iyo adeeg bixinta si faahfaahsan.
Foomka xiriirka - let martida ogyahay goorta ay filayaan jawaab.
Muuqaalka Captcha / Anti-Spam - waad ka xumaan doontaa haddii aadan sameyn! Bootooyinka ayaa si joogto ah u gurguurta goobaha oo ay soo gudbiyaan foomam marka aan la adeegsan.
Siyaasadda Khaaska ah - ogeysii dadka soo booqanaya sida aad uga faa'iideysanaysid xogta aad ka ururiso iyaga. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato Shuruudaha Adeegga haddii aad adeeg nooc kasta ah ka bixinayso bartaada. Khamaarkaaga ugu fiican ayaa ah inaad la hadasho qareen!
Bogga Su'aalaha - su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan alaabadaada iyo adeegyadaada.
Bogga Blog - wararka shirkadda, wararka warshadaha, talo, iyo sheekooyinka macmiilka ee aad la wadaagi karto dhagaystayaashaada.
Muuqaalka faallada - kordhiya kaqeybgalka isticmaalaha.
Search bar - u fududee martida inay helaan macluumaadka ay raadinayaan.
galeeysid - muuji qoraalladii ugu dambeeyay ama ugu caansan ee blogga, wac-ficil, ama qoraallo la xiriira.
Saxaafada Bulshada - waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si fudud ula wadaagaan qodobbadaada.
Mawduucyada kale iyo Qodobbada Naqshadeynta ee la tixgelinayo:
Si fudud loo aqrin karo, font nadiif ah - Xusuusnow farta noocaas ah ee loo yaqaan 'serif fonts' ayaa runtii akhristayaasha u oggolaaneysa inay si fudud u akhriyaan waxyaabaha ku jira Maaha wax aan caadi ahayn in loo isticmaalo xarfaha noocyada 'Sans-serif' ee cinwaannada iyo cinwaannada 'serif-fonts' ee nuxurka jirka.
Xiriirinta si fudud loo fahmi karo - midabada, hoosta ka xariiq, ama badhamadu waxay u horseedi doonaan dadka isticmaala inay dhagsadaan oo aysan niyad jabin.
Jawaab celinta moobilka - nashqadeynta degel casri ah oo aad ugu muuqda aaladda moobaylka waa waajib!
Hamburger menu goobta mobilada
Adeegso midabbo iska soo horjeedda
Adeegso hubinta higaada - waxaan jecelnahay Grammarly!
Waxyaabaha Raadinta Raadinta:
Cusbooneysiinta cinwaanka iyo tusmada - hagaaji cinwaankaaga iyo sharaxaadda maadada si isticmaaleyaasha mashiinka raadinta ay u badan tahay inay riixaan.
Abuuritaanka khariidad deg deg ah - iyo u gudbinta aaladaha mareegaha guud.
Si fudud loo cusbooneysiiyo qaabdhismeedka URL - gaagaaban, URL-yada kooban ee aan adeegsanayn calaamadaha iyo lambarradu way fududahay in la wadaago oo soo jiidasho leh ayaa la gujin karaa.
Server iyo Hosting:
Martiqaad deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo - waxaan jecelnahay Flywheel!
Muuqaalka keydka bogga tooska ah - bartaadu waxay u baahan tahay in la kaydiyo habeenkiina si fududna loo soo celiyo. Inta badan barnaamijyada martigelinta wanaagsan ayaa bixiya tan.
SSL / HTTPS - hubi in bartaadu haysato shahaado nabadgelyo, gaar ahaan haddii aad ka soo ururinayso macluumaadka martida. Tani waa waajib maalmahan maadaama daalacashada casriga ahi sida caadiga ah ay ka fogaan doonaan wax kasta oo ka kooban waxyaalaha aaminka ah.
Shuruudaha Farsamada gadaal:
Adeegso CMS - waa wax aan macquul aheyn in lala tartamo nidaamyada maareynta maaddada maanta si loogu daro dhammaan qalabka, isku dhafka, iyo wax ku oolnimada adoo isku dayaya inaad qorto barnaamijkaaga internetka. Raadi a CMS oo leh awood SEO weyn isla markaana si dhakhso leh u hirgeliyaan.
Koodhka la hagaajiyay ee loogu talagalay bogga dhejinta - Nidaamyada casriga ah ee CMS waxay ku daraan xog ururin si ay u keydiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo bog internet si wax loo waydiiyo loona muujiyo Koodh xad-dhaaf ah oo xad-dhaaf ah ayaa culays culus saari kara server-kaaga (gaar ahaan marka martida isku mar ay garaacayso goobtaada), sidaa darteed koodh si fiican loo qoray waa waajib!
Isdhexgalka Google Search Console
Is dhexgalka Google Analytics - xitaa si ka sii wanaagsan ayaa noqon kara isku-dhafka Maareeyaha Google Tag ee Google Analytics la qaabeeyey.
Microformats - Tilmaamida Schema.org ee Google si ay u aqriso (gaar ahaan haddii aad tahay ganacsi maxalli ah), xogta Twitterka ee twitter, iyo tagitaanka OpenGraph ee Facebook dhammaantood waxay sare u qaadi karaan muuqaalkaaga marka bartaada la wadaago ama laga helo raadinta iyo warbaahinta bulshada.
Cadaadiska warbaahinta - isticmaal an adeegga riixo sawirka si aad u dardar galiso sawirkaaga adigoon wax tabin tayada sawirada.
Gaadiidka Ciladda - Sawirada, maqalka, iyo fiidiyowgu uma baahna inay isla markiiba ku shubtaan bogga illaa laga daawado, ama la dhageysto. Adeegso tikniyoolajiyadda rarka caajiska ah (oo lagu dhisay WordPress) si aad u muujiso boggaaga marka hore… ka dibna soo bandhig warbaahinta marka loo baahdo.
Goobta Goobta - markii bartaada la keeno, waxay noqon kartaa dhakhso. Laakiin ka warran markaad haysato tobanaan kun oo booqasho maalin gudaheed ah… ma shilaysaa mise way sii socon doontaa?
Waxyaabaha laga fogaado:
Adeegso adeegga martigelinta fiidiyowga, ha ku shubin fiidiyowyada server-kaaga
Ka fogow heesaha asalka ah
Ha isticmaalin Flash
Ka fogow Guji si aad u gasho goobaha (haddii aysan jirin xaddidaadyo xagga da'da ah)
Ha xadin waxyaabaha, sawirada, ama hantida kale
Ha la wadaagin macluumaad qarsoodi ah
Waxyaabo Dheeraad Ah Ayaa La Waayay
Saxiixa Warqadda - Dad badan oo soo booqda bartaada diyaar uma noqon doonaan inay iibsadaan laakiin waxay isku qori doonaan inay hadhow iibsadaan ama xiriir la yeeshaan. Qabashada emaylku waa cunsur muhiim u ah ganacsi kasta!
CDN - Shabakadaha Bixinta Macluumaadka waxay xawaareyn doontaa bartaada.
Robots.txt - U oggolow makiinadaha raadinta inay ogaadaan waxa ay sameyn karaan iyo inaysan tilmaami karin, iyo halka laga helayo khariidaddaada bogga. Akhriso: Waa maxay Raadinta Mashiinka Raadinta?
Goobaha Bogagga - Bogagga soo dhicidda waa waajib in la haysto. Bogagga loogu talagalay booqde kasta oo dhiirrigeliya oo gujiyay wicitaan-ficil ayaa muhiim u ah guusha beddelkaaga. Bogagga degitaanka ee ku milmaya maareynta xiriirka macaamiisha iyo suuqgeynta aaladaha otomatiga ayaa xitaa ka sii wanaagsan. Akhriso: 9 Khaladaadka Bogga Soo Degida ee Laga Fogaado
Podcasts - Podcasting wuxuu sii wadaa natiijooyinka ganacsiga. Ganacsiyadu waxay bartilmaameedsan karaan hogaaminta wareysiyada, waxay kaqaadan karaan markhaatiyada macaamiisha, waxay bartaan macaamiishooda, waxayna dhisaan maamulka warshadooda. Akhriso: Maxay Shirkaduhu u yihiin Podcasting
videos - Xitaa ganacsiyada yaryari way awoodi karaan fiidiyowyada aasaasiga ah… waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa taleefankaaga casriga ah oo waad fiicantahay inaad tagto! Laga soo bilaabo fiidiyeyaasha sharraxayaasha illaa markhaatiyada macaamiisha, waad la yaabi doontaa inta booqdayaashu aysan aqrin doonin, laakiin waxay daawan doonaan fiidiyowyada dhammaan bartaada. Ha ka baqin inaad ku dhex gasho waxyaabahaaga oo dhan. Akhriso: Waa maxay sababta Video Video-ga uu u leeyahay mudnaan iyo 5 nooc oo fiidiyowyo ah oo ay tahay inaad soo saarto
Map - Ma ka diiwaangashan tahay Ganacsiga Google? Waa inaad noqotid raadinta khariidada meheraddaada. Waxaanan kugu dhiiri galin lahaa inaad sidoo kale ku darto khariidada bartaada.
Logo Bar - Haddii aad tahay shirkad B2B ah, haysashada calaamadda astaamaha ayaa muhiim ah sidaa darteed rajadu way arki kartaa cidda kale ee aad la shaqeyneyso. Waxaan dhisnay an mashiinka wareega ee sawirka sababtaas awgeed.
Kheyraadka Premium - Haddii aadan soo saarin waxyaabaha aasaasiga ah sida faahfaahinta, waraaqaha caddaanka ah, iyo daraasadaha kiiska, waxaad seegaysaa siyaabo badan oo aad ku soo jiidan karto martida inay kula xiriiraan adoo adeegsanaya bogagga degitaankaaga! Akhriso: Xeeladaha Suuqgeynta Sare ee Jiilka Lead
Heerarka Mobilada - Maqaallada Facebook ee degdegga ah, Apple News, iyo Google Pages Mobile Pages waa bogag cusub oo heerar isku dhafan oo ay tahay inaad daabacdo. Akhriso: Waxaan hadda ku jirnaa Apple News
Tags: nagu saabsannagu saabsan bogaggaampanti spammuusikada asalka ahblogrootiga jajabinta rootigarooti rootirootiga rootigaxayawaankasaacadaha shaqadamacluumaadka ganacsigawac talaabou wac badhanka ficilkacaptchaliiska hubintafaallooyinka faallooyinkacommentsfoomka xiriirctadoodmagaca domainFAQFAQsflashAnalytics googlekhariidadda googlekhariidadaha googlegoogle ganacsigeygahamburger menuMuuqaal Muuqaalimagesxiriirada gudaharaadinta gudahaboggaga soo degayalogoastaanta RotatorMacluumaadka SuuqgeyntaSuuqgeynta Suuqgeyntamenu guurguurabarnaamijyaheyga webkanavigationis diiwaangelinta warsidewarsidaha iska qorwarsidahachat chatlambarka taleefankapodcastingwaxyaabaha ugu horreeyacontent tayadaNaqshad wax ku ool ahReviewsaaladomuuqaalada goobtamacluumaadka goobtaSliderganacsiga yaryarbadhanka raacitaanka bulshadabadhamada wadaagga bulshadaspamsumadayntamarqaatiyaaldusha sarefiidiyowga fiidiyowgavideosliiska hubinta boggamacluumaadka ganacsiga boggamuuqaalada boggawaraaqaha caddaanka ah
Nov 25, 2016 saacadu markay tahay 1:36 PM
Hoos waxaa ku qoran qodobbada kale iyo qodobbada naqshadeynta ee la tixgelinayo miyaan ku dari karaa baaragaraafyo gaagaaban iyo sidoo kale rasaas iyo lambarro? Haa, kuwani waa qeyb ka mid ah waxa ka dhigaya mid nadiif ah oo laga akhrisan karo websaydhka (qodobkaaga # 31) laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in si gaar ah loogu xuso qaybtan ka mid ah warbixintaada.
Oktoobar 25, 2017 at 11:36 AM
Waxaan abuuray liistada Hubinta Websaydhada oo xoogaa farsamo ka badan kana caawin karta horumariyeyaasha markay bilaabayaan degel cusub: http://nali.org/website-checklist/
Oktoobar 27, 2017 at 9:32 AM
Waad ku mahadsan tahay wadaagista, Nick!
Nov 18, 2020 saacadu markay tahay 12:46 PM
Fantastic, sidaas waxtar leh! Mahadsanid